Megalodon ukrebe: iimpawu, indawo yokuhlala kunye nokutya | Ngeentlanzi
Sihamba siye ngaphambili ukukhumbula ukrebe owayehlala kwiminyaka eyi-19 yezigidi eyadlulayo. Igama lakhe ngukrebe megalodon. Eli gama livela kulwimi lwesiGrike kwaye lithetha "izinyo elikhulu". Yayihlala ngexesha leCenozoic kunye nePliocene kwaye yayisesinye sezidalwa ezinomtsalane kwiplanethi yethu yonke. Okwangoku iphelile, ke akusekho zimpawu.
Siza kukuxelela zonke iimpawu, umdla kunye neemfihlelo ze-megalodon shark.
3 Uluhlu kunye nendawo yokondla i-megalodon shark
4 Isicwangciso sokuzingela
Luhlobo lokrebe oluthi, ngokubhekiselele kwirhafu, lusapho lakwaLamnidae. Kule nto kukho ukuphikisana okuninzi kwihlabathi lenzululwazi ukusukela, sithetha nge a iintlobo ezingabonwanga ngabantu ngamehlo abo. Ke ngoko, kukho izazinzulu ezibeka olu hlobo kusapho lwaseOtodontidae.
Zonke iimpawu zesi silwanyana kufuneka ziqwalaselwe kwifom yefosili. Ngokrebe oseka umzimba wayo ikakhulu kwintlala. Ayaziwa ngokuthe ngqo ukuba bungakanani ubungakanani bayo. Ziingqikelelo ezithile kuphela ezaziwayo ukuba baveza ukuba banokulinganisa phakathi kwe-14 kunye ne-20 yeemitha ubude. Ukwenzela ukuqikelela obu bude, ubude bamazinyo ayo buthathwa njengesalathiso xa kuthelekiswa nento enokuthi ichazwe njengohlobo lwangoku lwe-megalodon. Sithetha ngayo Ukrebe omhlophe.
Malunga nobunzima bayo, izazinzulu ziye zakwazi ukufikelela kwisigqibo sokuba i-megalodon shark inokuba nobunzima obufikelela kwiitoni ezingama-50. Oku kusenze saphinda sazicingela ubungakanani obabunokubakho obu krebe. Isilwanyana esimalunga neetoni ezingama-50 sinokuba yingozi ebantwini kwaye ngakumbi xa sijonga ukuba sisidalwa esidla inyama.
Iilwandle zakudala zeplanethi yethu zazine-megalodon njengesona sidalwa siphambili sazo. Ingathi sithelekisa ukrebe omhlophe wanamhlanje kodwa enobukhulu obugqithisileyo. Ingathi ingaba yeyodidi ekuthiwa "super predators" apho siquka ezinye iintlobo ezinje ngeMosasaurus kunye nePliosaurus. Ezi zilwanyana zazingenawo amarhamncwa endalo kwaye zaziphezulu kwityathanga lokutya liphela.
Ngokubhekisele kwintloko yakhe, kunokuthiwa amehlo akhe amnyama ayengena kwaye yayiyeyona incinci ibalaselisiweyo kuyo yonke intloko, kuba umlomo wakhe wawunomtsalane. Lo mlomo ubunobude beemitha ezi-2 kwaye ubunjwe ubuncinci ngamazinyo angama-280 ubukhulu obukhulu. Amazinyo ayemile ngunxantathu, omelele kwaye amile okwe sarha. Isisu ngasinye sigqithe ngeesentimitha ezili-13 ubude. Amandla akhe agqwesileyo yeyona nto ibalaseleyo kule krebe. Kwaye ukuluma kwayo kwakomelele kangangokuba kungatyumza iitoni ezili-18, amandla angaphezulu ngokwaneleyo ukuba angatshabalalisa amathambo alo naliphi na ixhoba.
Ngokubhekisele kwiimpiko zayo, yayinomphetho womqolo owawubonakala kude kunye ne-morphology efana neyeseyile yenqanawa. Onke amalungu ayo ayemade, kodwa loo nto ayizange iyenze icothe. Iifinshi zepectoral zezona zibonelela ngesona santya siphezulu kuba zinokuqhutywa kunye nomsila. Kungenzeka ukuba zazinamaphiko atyebileyo kwaye amakhulu kunalawo okrebe omhlophe.
Umsila wayo wawufana ncam noka sharki omhlophe. Ifunxe ioksijini ngemithambo esemacaleni omzimba wayo. Ukuthintela ukuntywila, ugcine umzimba wakhe uphela ushukuma rhoqo. Imigangatho ye-Gill yayingenayo inkqubo yokufunxa njengemiphunga yethu. Ke ngoko, kwafuneka aqhubeke nokuhamba rhoqo.
Uluhlu kunye nendawo yokondla i-megalodon shark
Ayisiyiyo yonke into eyaziwayo ngokuqinisekileyo ngale krebe, kodwa kuye kwakho izifundo ezahlukeneyo ngayo. Olu phononongo lutyhile ukuba eli rhamncwa lalikho kuzo zonke iilwandle zomhlaba wethu nge-Neogene. Kuyenzeka ukuba kufunyanwe ezinye iintsalela zoluhlobo kwezinye iindawo njengeziQithi zeCanary, ilizwekazi laseAsia, iAustralia neMelika. Oku kusikhokelela kwisigqibo sokuba sihleli sisasazekile kuwo onke amalwandle omhlaba.
Ngokumalunga nokutya, yenye yezona ndawo zidla inyama inkulu kwimbali yonke. Yayikwazi ukutyisa phantse naluphi na uhlobo lwesilwanyana, ukusuka kwiifudo ukuya kwezinye iintlobo zookrebe kunye neminenga. Ngamazinyo kunye nomthamo wayo omkhulu wokuluma inokutshabalalisa amathambo ngalo naluphi na uhlobo lwamaxhoba. Kufuneka ithathelwe ingqalelo ukuba bubungakanani obukhulu kunye namandla okwenza ukuba babe noloyiko olukhulu kwezinye izilwanyana ezincinci.
Ngamazinyo aso angama-280 yayikwazi ukutyumza nantoni na enobunzima obufikelela kwiitoni ezingama-20. Kwakungenakwenzeka ukuba nayiphi na ixhoba layo libaleke emazinyweni alo. Olunye uphawu olwahlukileyo xa kufikwa ekondleni yayikukuxakeka okukhulu xa kufikwa ekuhambeni emanzini nakuzo zonke iintlobo ze-morphology yaselwandle. Ngobuninzi bamaphiko ayo kunye nobuchule bayo xa isiza kushukuma, kwakungekho nalinye ixhoba elinokuthi libaleke.
Ngokumalunga nobude bokuphila kwakho, Kuqikelelwa ukuba i-megalodon shark yayinobomi obulindelweyo phakathi kweminyaka engama-50 ukuya kweli-100.
Kuba sithetha ngesilwanyana esirhubuluzayo, le krebe ikwisigaba sayo esidala okanye inokutya zonke iintlobo zezilwanyana ezikhulu. Wayenomdla wokutya okumnyanzela ukuba achithe ixesha elininzi lobomi bakhe ekhangela ukutya. Kuqikelelwa ukuba wayenokutya ukuya kuthi ga kwiiponti ezingama-2500 XNUMX zeentlanzi ngosuku.
Ukwenza le leta inzima wayenamaqhinga awahlukeneyo. Enye yayiyifihla. Umbala wolusu lwakhe wamenza waba ngummangaliso obalaseleyo. Ulusu lwakhe lwalumhlophe okanye ezantsi lumpunga mnyama ngaphezulu. Ngubani owabona ukusuka ezantsi phezulu engazi ukuba amanzi acwengileyo abalekile kukrebe. Ngokuchasene noko, abo bayibonayo ukusuka phezulu ezantsi babengaboni ukuba yayilapho ngenxa yobumnyama bobunzulu. Le yimfihlelo eyayinayo i-megalodon kwaye yayisebenza ukubamba ixhoba labo.
Isicwangciso-qhinga sakhe sasisekwe ekuhlaseleni ithagethi isuka ezantsi ithatha inyusa enkulu ngenxa yesantya awasinikwa ngumsila wakhe. Yakhawuleza yavula umlomo wayo yonakalisa iindawo ezibalulekileyo ukuze ixhoba lingakwazi ukuhamba. Kukrazule la malungu abalulekileyo ngokulunywa okukhulu, kushiya inxeba elikhulu elivulekileyo elingenakuphola. Walinda isilwanyana ukuba siphume de sife size siqhubeke sitye.
Ndiyathemba ukuba olu lwazi lukunceda ukuba wazi ngakumbi nge-megalodon.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Megalodon ukrebe